Kulmiye cid A/rahman Ciro la tartanta ma hayaan helina maayaan by Abdi Mustafe‏
Kulmiye cid A/rahman Ciro la tartanta ma hayaan helina maayaan by Abdi Mustafe‏ 0 August 01, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 512
Kulmiye cid A/rahman Ciro la tartanta ma hayaan helina maayaan by Abdi Mustafe‏ Marka dhawaan Silaanyo loo diro Nursing Home ama
meel dadka waa weyn lagu xanaaneeyo oo London ku taala Kulmiye na wuu kala yaacayaa. Kulmiye intuu noolyay waa inta ka hadhay cimriga xukuumadan hase yeeshee ilaa iminka cid A/rahman Ciro la soo dhigan karta oo la tartami karta ma hayaan. Sabab tuna tahay Hadii
Muse Biixi musharax noqdo goblada badan kooda dakene ayaa kala jiifa oo
cidi u codeyn meyso cid walibana wey ogtay. Hadii Mohamed Biixi musharax noqdana oo ay adagtay sida uu ku noqdaa isna meel gaadhi maayo oo waa nin tala aduun ka yaqaan jilibka hoose ee uu ka soo jeedo in uu soo gaadh siiyo Nuux Ismailka kale oo Vision ama aragti
dheer malaha oon ahayn faan iyo fatoosh iyo tamar daraan iyo dhaqanka dalka oo aannu aqoon. Samaale isna dhulkaba ka kici maayo oo beesha uu ka soo jeedo ayaannu ba ka soo baxayn isaga iyo Muse Biixi na laba gambadh bay isugu fadhiyaan oo sida dhoorayda ayay timaha is heystaan. Xisbiga Waddani si sahlan oon lurba lahayn ayuu kursiga ku fuulayaa ileyn cid ka dheer oo dhaafaysaa maba jirtee. Xisbiga Kulmiye kama duwana qof bukaan jiifa oo sariirta saaran sabab tuna tahay Mohamed Biixi iyo Muse Biixi iyo Samaale sadexduba waa isku beel. Eesh qiyaasak!!! Sidaa darteed isma booqdaan ee daymada guud wey iska bogtaan. Waa
calaamadaha uugu horeeya ee reer u diida in ay kursiga fuulaan welibana
isu deyn maayaan. Aafada musharax nimada ka weyn baa iyana ah cidii xisbiga u hadhi lahayd. Qoyska Silaanyo waxay ku dacwiya yaan xisbiga anagaa le oo cidaannu doono ee beesha Silaanyo aha ayaannu u dhiibanaynaa si ay tartan nada beryaha danbe uugu soo galaan. Waxa halkan soo taagan oo gudoomiya nimada xisbiga u diyaara, Xirsi, Mohamed Kaahin, Maxamoud Xaashi iyo Morgan. Halkaana belo ayaa ka higle. Isku soo xoori oo Kulmiye tartan ma geli karo mana sii noolaan karo. Silaanyo na wuxuu socodka biif taamin jiray waa bes taladiiye.
Xukuumada Kulmiye waxa ay Kutalo gashay in aanay Wax Dawlad ahi kadanbaynin Dalkana Burburo iyaga Dabadood
14/04/2017 - 14:07:40
Daawo Dad ah oo Haraad iyo Gaajo Ugu dhintay Somaliland iyo War la,aanta Xukuumada Kulmiye
14/04/2017 - 13:06:03
Ambassador Gaaruf Muu Abbaarin Xaqiiqada Iyo Waxa Keenay Sarrif Bararka: W/Q Cabdiraxmaan Cadami
13/04/2017 - 06:51:13